October 6, 2021 - ApannPyay Media
ကိုဗစ်ကူးစက်ရင် အသေပဲခံလိုက်မယ် ကာကွယ်ဆေးတော့ မထိုးချင်ဘူး ဆိုတဲ့ ရွှေအိမ်စည်
ကိုဗစ်ကူးစက်ရင် အသေပဲခံလိုက်မယ် ကာကွယ်ဆေးတော့ မထိုးချင်ဘူး ဆိုတဲ့ ရွှေအိမ်စည် သရုပ်ေ ဆာင် မော်ဒယ်လ် ရွှေအိမ်စ ည် ကတော့ လက် ရှိ မှာ ကိုယ်ပိုင် website တစ်ခု ပြုလုပ်လ ျှက်ပြီး သူမအနေနဲ့ နိုင် ငံရပ်ခြားမှာ ထိုးဖော က်ဖို့အတွ က်လည်း ပြင်ဆင်နေတ ယ်လို့ သိရပါတယ်။ “ လောလောဆယ် modelling နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ website တစ်ခု လုပ်နေတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ လန်ဒ န်ကို ပြန်သွား ပြီတော့ အိမ်စည့် ရဲ့ လက်ရှိ မော်ဒယ် လ် အလုပ်ကိုရော သရုပ်ဆောင်ပိုင်းကိုပါ တိုးချဲ့ချင် တာ။ မြန်မာနိင်ငံ မှာတော့ အိမ်စည်က အတိုင်းအ … Read more
October 7, 2021 October 6, 2021 by ApannPyay Media
ဆရာမလေးရဲ့မေးခွန်းကြောင့် မျက်လုံးပြူးသွားရတဲ့ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးအဖြစ် ” တက္ကသိုလ်သာ ပို့လိုက်ပါတော့ ဆရာမ” သုံးတန်းကျောင်းသားက ဆရာမကို လာပြောတယ်။ ” ကျနော်က …ကျနော့ညီမထက် တော်တယ်။ သူကတော့ လေးတန်းမှာ” ဒီလို ….ဒီလိုနဲ့….အမြဲပြောနေတော့ဆရာမ က…သူ့ကို …..ကျောင်းအုပ် ဆရာကြီးဆီခေါ်သွားခဲ့တယ်။ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးက လေးတန်းစာ….စစ်ကြည့်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်။ ” ၃ + ၃”” ၆ ” ” ၆+၆ “”၁၂ ” ……. ? (—— ) ……. ! ( —— ) ဆရာကြီးမေးတာ ကျောင်းသားက …အားလုံး မှန်အောင်ဖြေနိုင်တယ်။ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးက ဒီကျောင်းသားလေးကိုလေးတန်း ချက်ခြင်းပို့ခိုင်းတယ်။ ဆရာမက …..ထပ်စစ်ချင်တယ်ပြောတော့ဆရာကြီးက ခွင့်ပြုလိုက်တယ်” ” နွားမှာ လေး … Read more
ဘေဘီမောင်ရဲ့စပွန်ဆာဘဲတွေပုံတွေ တင်ပြီးတိုက်ခိုက်လာကြတဲ့အပေါ် တုံ့ပြန်လာတဲ့ မေပန်းချီ
ဘေဘီမောင်ရဲ့စပွန်ဆာဘဲတွေပုံတွေ တင်ပြီးတိုက်ခိုက်လာကြတဲ့အပေါ် တုံ့ပြန်လာတဲ့ မေပန်းချီ ဘေဘီမောင်ရဲ့ရည်းစားဟောင်းပုံတွေကိုကြည့်ပြီးသူမရဲ့ခံစားချက်တွေကိုပြောပြလာတဲ့သရုပ်ဆောင်မေပန်ချီပရိတ်သတ်ကြီရေ၊အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်သရုပ်ဆောင်မေပန်ချီကတော့ဘေဘီမောင်ရဲ့ရည်းစားဟောင်းပုံတွေကြည့်ပြီးသူမရဲ့ခံစားချက်တွေကိုအခုလို​ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်နော်။ သရုပ်ဆောင်မေပန်းချီကကျွန်မနဲ့ဖြစ်တာငဖြစ်တာပါပဲရှင့်၊ဒါကြီးကတော့မတင်သင့်ပါ၊ကျွန်မတို့လဲexဆိုတာရှိပါတယ်၊ပြသနာရဲ့အဓိကအကြောင်းအရင်းကိုပဲကျွန်မဦးတည်ပါတယ်၊ကျန်တဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ကျွန်မဝမ်းမသာတတ်ပါဘူး။ ကျေးဇူးပြုပြီးဖျတ်ပေးလိုက်ပါဆိုပြီးCommentsမှာပြန်လည်ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးများအတွက်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ခရက္စစ် ဘေဘီမောင်ရဲ့စပွန်ဆာဘဲတွေပုံတွေ တင်ပြီးတိုက်ခိုက်လာကြတဲ့အပေါ် တုံ့ပြန်လာတဲ့ မေပန်းချီ ဘေဘီမောင်ရဲ့ရည်းစားဟောင်းပုံတွေကိုကြည့်ပြီးသူမရဲ့ခံစားချက်တွေကိုပြောပြလာတဲ့သရုပ်ဆောင်မေပန်ချီပရိတ်သတ်ကြီရေ၊အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်သရုပ်ဆောင်မေပန်ချီကတော့ဘေဘီမောင်ရဲ့ရည်းစားဟောင်းပုံတွေကြည့်ပြီးသူမရဲ့ခံစားချက်တွေကိုအခုလို​ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်နော်။ သရုပ်ဆောင်မေပန်းချီကကျွန်မနဲ့ဖြစ်တာငဖြစ်တာပါပဲရှင့်၊ဒါကြီးကတော့မတင်သင့်ပါ၊ကျွန်မတို့လဲexဆိုတာရှိပါတယ်၊ပြသနာရဲ့အဓိကအကြောင်းအရင်းကိုပဲကျွန်မဦးတည်ပါတယ်၊ကျန်တဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ကျွန်မဝမ်းမသာတတ်ပါဘူး။ ကျေးဇူးပြုပြီးဖျတ်ပေးလိုက်ပါဆိုပြီးCommentsမှာပြန်လည်ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးများအတွက်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ခရက္စစ် ေဘဘီေမာင္ရဲ့စပြန္ဆာဘဲေတြပုံေတြ တင္ၿပီးတိုက္ခိုက္လာၾကတဲ့အေပၚ တံု႔ျပန္လာတဲ့ ေမပန္းခ်ီ ေဘဘီေမာင္ရဲ့ရည္းစားေဟာင္းပုံေတြကိုၾကည့္ၿပီးသူမရဲ့ခံစားခ်က္ေတြကိုေျပာျပလာတဲ့သ႐ုပ္ေဆာင္ေမပန္ခ်ီပရိတ္သတ္ႀကီေရ၊အခုတစ္ခါမွာဆိုရင္သ႐ုပ္ေဆာင္ေမပန္ခ်ီကေတာ့ေဘဘီေမာင္ရဲ့ရည္းစားေဟာင္းပုံေတြၾကည့္ၿပီးသူမရဲ့ခံစားခ်က္ေတြကိုအခုလို​ေျပာျပလာခဲ့ပါတယ္ေနာ္။ သ႐ုပ္ေဆာင္ေမပန္းခ်ီကကၽြန္မနဲ႔ျဖစ္တာငျဖစ္တာပါပဲရွင့္၊ဒါႀကီးကေတာ့မတင္သင့္ပါ၊ကၽြန္မတို႔လဲexဆိုတာရွိပါတယ္၊ျပသနာရဲ့အဓိကအေၾကာင္းအရင္းကိုပဲကၽြန္မဦးတည္ပါတယ္၊က်န္တဲ့မဆိုင္တဲ့ကိစၥေတြအတြက္ကၽြန္မဝမ္းမသာတတ္ပါဘူး။ ေက်းဇူးျပဳၿပီးဖ်တ္ေပးလိုက္ပါဆိုၿပီးCommentsမွာျပန္လည္ေရးသားေဖာ္ျပထားပါတယ္စာဖတ္ပရိတ္သတ္ႀကီးမ်ားအတြက္ျပန္လည္တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။ခရကၥစ္ ေဘဘီေမာင္ရဲ့စပြန္ဆာဘဲေတြပုံေတြ တင္ၿပီးတိုက္ခိုက္လာၾကတဲ့အေပၚ တံု႔ျပန္လာတဲ့ ေမပန္းခ်ီ ေဘဘီေမာင္ရဲ့ရည္းစားေဟာင္းပုံေတြကိုၾကည့္ၿပီးသူမရဲ့ခံစားခ်က္ေတြကိုေျပာျပလာတဲ့သ႐ုပ္ေဆာင္ေမပန္ခ်ီပရိတ္သတ္ႀကီေရ၊အခုတစ္ခါမွာဆိုရင္သ႐ုပ္ေဆာင္ေမပန္ခ်ီကေတာ့ေဘဘီေမာင္ရဲ့ရည္းစားေဟာင္းပုံေတြၾကည့္ၿပီးသူမရဲ့ခံစားခ်က္ေတြကိုအခုလို​ေျပာျပလာခဲ့ပါတယ္ေနာ္။ သ႐ုပ္ေဆာင္ေမပန္းခ်ီကကၽြန္မနဲ႔ျဖစ္တာငျဖစ္တာပါပဲရွင့္၊ဒါႀကီးကေတာ့မတင္သင့္ပါ၊ကၽြန္မတို႔လဲexဆိုတာရွိပါတယ္၊ျပသနာရဲ့အဓိကအေၾကာင္းအရင္းကိုပဲကၽြန္မဦးတည္ပါတယ္၊က်န္တဲ့မဆိုင္တဲ့ကိစၥေတြအတြက္ကၽြန္မဝမ္းမသာတတ္ပါဘူး။ ေက်းဇူးျပဳၿပီးဖ်တ္ေပးလိုက္ပါဆိုၿပီးCommentsမွာျပန္လည္ေရးသားေဖာ္ျပထားပါတယ္စာဖတ္ပရိတ္သတ္ႀကီးမ်ားအတြက္ျပန္လည္တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။ခရကၥစ္
အခုချိန်မှာ ကားရိုက်လက်ခံရင် ပရိသတ်က ဆဲကြမှာလား.
October 6, 2021 October 6, 2021 by ApannPyay Media
အခုချိန်မှာ ကားရိုက်လက်ခံရင် ပရိသတ်က ဆဲကြမှာလား ပရိသတ်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင် ကားရိုက်လက်ခံချင်ပါတယ်။ ရတဲ့ အနုပညာကြေးအားလုံးကိုအကုန်လှူချင်လို့ပါဆိုတဲ့နေမျိုးအောင်တို့ဇနီးမောင်နှံပရိသတ်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင် ကားရိုက်လက်ခံချင်ပါတယ်။ ရတဲ့ အနုပညာကြေးအားလုံးကို အကုန်လှူချင်လို့ပါဆိုတဲ့ နေမျိုးအောင်တို့ ဇနီးမောင်နှံ။ပရိသတ်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင် ကားရိုက်လက်ခံချင်ပါတယ်။ ရတဲ့ အနုပညာကြေးအားလုံးကိုအကုန်လှူချင်လို့ပါဆိုတဲ့နေမျိုးအောင်တို့ဇနီးမောင်နှံပရိသတ်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင် ကားရိုက်လက်ခံချင်ပါတယ်။ ရတဲ့ အနုပညာကြေးအားလုံးကို အကုန်လှူချင်လို့ပါဆိုတဲ့ နေမျိုးအောင်တို့ ဇနီးမောင်နှံ။ ပရိသတ်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင် ကားရိုက်လက်ခံချင်ပါတယ်။ ရတဲ့ အနုပညာကြေးအားလုံးကိုအကုန်လှူချင်လို့ပါဆိုတဲ့နေမျိုးအောင်တို့ဇနီးမောင်နှံပရိသတ်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင် ကားရိုက်လက်ခံချင်ပါတယ်။ ရတဲ့ အနုပညာကြေးအားလုံးကို အကုန်လှူချင်လို့ပါဆိုတဲ့ နေမျိုးအောင်တို့ ဇနီးမောင်နှံ။ပရိသတ်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင် ကားရိုက်လက်ခံချင်ပါတယ်။ ရတဲ့ အနုပညာကြေးအားလုံးကိုအကုန်လှူချင်လို့ပါဆိုတဲ့နေမျိုးအောင်တို့ဇနီးမောင်နှံပရိသတ်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင် ကားရိုက်လက်ခံချင်ပါတယ်။ ရတဲ့ အနုပညာကြေးအားလုံးကို အကုန်လှူချင်လို့ပါဆိုတဲ့ နေမျိုးအောင်တို့ ဇနီးမောင်နှံ။ ပရိသတ်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင် ကားရိုက်လက်ခံချင်ပါတယ်။ ရတဲ့ အနုပညာကြေးအားလုံးကိုအကုန်လှူချင်လို့ပါဆိုတဲ့နေမျိုးအောင်တို့ဇနီးမောင်နှံပရိသတ်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင် ကားရိုက်လက်ခံချင်ပါတယ်။ ရတဲ့ အနုပညာကြေးအားလုံးကို အကုန်လှူချင်လို့ပါဆိုတဲ့ နေမျိုးအောင်တို့ ဇနီးမောင်နှံ။ပရိသတ်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင် ကားရိုက်လက်ခံချင်ပါတယ်။ ရတဲ့ အနုပညာကြေးအားလုံးကိုအကုန်လှူချင်လို့ပါဆိုတဲ့နေမျိုးအောင်တို့ဇနီးမောင်နှံပရိသတ်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင် … Read more
ငါ့လိုအမှန်ကနေ အမှားဖြစ်မယ်ဆိုပြီး မေပန်းချီကို အားပေးစကားပြောလာတဲ့ နေဒွေး
ငါ့လိုအမှန်ကနေ အမှားဖြစ်မယ်ဆိုပြီး မေပန်းချီကို အားပေးစကားပြောလာတဲ့ နေဒွေး လှပတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားတွေနဲ့အတူ ချစ်စရာကောင် းတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကြောင့် ယောက်ျားလေးတိုင်းရဲ့အချစ်တွေသာမက မိန်းကလေးတွေရဲ့အချစ်ကိုပါသိမ်းပိုက်ထားနိုင်တာကတော့ မော်ဒယ်သရုပ်ဆောင် မေပန်းချီပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ကြိုးစားမှုတွေကြောင့်လည်း ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာသည့်တိုင်အောင် အောင်မြင်မှုတွေ နဲ့ရပ်တည်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ အေးဆေးနေတက်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဘဝကိုလွတ်လပ်စွာဖြတ်သန်းနေတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အေးဆေးနေတက်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်သော်လည်း သူ့ကိုမနာလိုတဲ့လူတစ်စုရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုမကြာသေးခင်ကခံခဲ့ရပြီး လူမှုကွန်ရက်မှာ ပျံ့နှံ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်လည်း မေပန်းချီရဲ့နောက်ကွယ်မှ ာမဟုတ်မမှန်တာတွေပြောရင်းနဲ့ နာမည်ဖျက်ခြင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကိစ္စတွေကို မေပန်းချီက ပရိသတ်တွေထံ Liveလွှင့်ပြီးဖြေရှင်းခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေကလည်း နောက်ကွယ်တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေကို မကျေမနပ်ဖြစ်ပြီး ပန်းချီဘက်ကနေရပ်တည်ပေးနေတာပါ။မေပန်းချီကနောက်ဆုံးမှာတော့“ငိုပြီးရင်ငါ့အလှည့်ငါမငိုတော့ဘူးနော်…ကျားကျားယားယားပဲဖြေရှင်းတက်တက် တက်မပတ်ဘူး“ဆိုပြီး လူမှုကွန်ရက်ကေ နတင်လိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါPost အောက်မှာ သရုပ်ဆောင်နေဒွေးကလည်း ငါ့လိုအမှန်ကနေအမှားမဖြစ်ဖို့ဆိုပြီး ဂရုစိုက်ဖို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။မေပန်းချီတစ်ယောက်ဖြေရှင်းတာတွေဘယ်လိုတွေလာမလဲဆိုတာ ကတော့စောင့်ကြည့်ပေးပါဦးနော်။ klcelenews ငါ့လုိအမွန္ကေန အမွားျဖစ္မယ္ဆိုၿပီး ေမပန္းခ်ီကို အားေပးစကားေျပာလာတဲ့ ေနေဒြး လွပတဲ့ခႏၶာကိုယ္အခ်ိဳးအစားေတြနဲ႔အတူ ခ်စ္စရာေကာင္ းတဲ့ပုံရိပ္ေလးေတြေၾကာင့္ ေယာက္်ားေလးတိုင္းရဲ႕အခ်စ္ေတြသာမက မိန္းကေလးေတြရဲ႕အခ်စ္ကိုပါသိမ္းပိုက္ထားႏိုင္တာကေတာ့ ေမာ္ဒယ္သ႐ုပ္ေဆာင္ ေမပန္းခ်ီပဲျဖစ္ပါတယ္။သူမရဲ႕ႀကိဳးစားမႈေတြေၾကာင့္လည္း ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုၾကာသည့္တိုင္ေအာင္ ေအာင္ျမင္မႈေတြ … Read more
နာမည်ကိုသိရုံနှင့် စိတ်ဓါတ်ကို သိနိုင်အောင် တွက်နည်း
နာမည်ကိုသိရုံနှင့် စိတ်ဓါတ်ကို သိနိုင်အောင် တွက်နည်း သင့်ရဲ့ နာမည်ကို ကြည့်ပြီး သင့်ရဲ့ စိတ်နေ သဘာဝ ကို အကြမ်းဖျင်း တွက် လို့ ရတဲ့ နည်း ရှိတယ်။ သင့်ရဲ့ လူသိများသောအမည်ကို အောက်ပါအတိုင်းတွက်ပါ။ အ-အာ-ဥ-ဩ-ဧ = ၁ က-ခ-ဂ-ဃ-င. = ၂ စ-ဆ-ဇ-စ်-ည. = ၃ ယ-ရ-လ-၀. = ၄ ပ-ဖ-ဗ-ဘ-မ. = ၅ သ-ဟ. = ၆ တ-ထ-ဒ-ဓ-န-ဌ. = ၇ ဥပမာတွက်ပြမယ် ပန်း အိ ဖြိုး = ၅ + ၁ + ၅ = ၁၁ ရပါတယ် ၁၁ … Read more
မျက်ရည်တွေဝဲနေတဲ့ အသက်(၇၀)ကျော်အဖိုးအိုနဲ့ ဘတ်စ်ကားပေါ်က ဖြစ်ရပ်
မျက်ရည်တွေဝဲနေတဲ့ အသက်(၇၀)ကျော်အဖိုးအိုနဲ့ ဘတ်စ်ကားပေါ်က ဖြစ်ရပ် ဒီနေ့ ဂုဏ် သိက္ခာနဲ့မေတ္တာတရား ကိုလဲလှယ်ခဲ့တယ်… Busကားပေါ် ကျွန်မ တက်သွားတော့ လက်ထဲမှာပိုက်ဆံ၂ထောင် ပါလာတယ်….။ အလုပ်မှာထမင်းစားမှာက1800 ကားခက၂၀၀..ကွက်တိ ။ကားပေါ်မှာရှေ့ဆုံးခုံမှာနေရာရတယ်….။ အဲ့ဒီမှာ..ချောင်လေးမှာကုတ်ကုတ်လေးနဲ့..မျက်ရည်တွေဝဲနေတဲ့. အသက်(၇၀)ကျော်ခန့် ရှိတဲ့အရမ်းဆင်းရဲချို့တဲ့ပုံရတဲ့အဘိုးတစ်ယောက်ကို သွားတွေ့တယ် … ။ ကိုယ့်ေ ဘးမှာထိုင်နေတဲ့သူတွေ ကိုဝေ့ဝဲကြည့်လိုက်တော့အသက်ခပ် လတ်လတ်ပိုင်းတွေအများကြီး.. သူတို့ကို အာ့အဘိုးအိုကြီးကိုမမြင်ကြဘူးလားဆိုတဲ့အကြည့်မျိုးနဲ့ အားမနာတမ်းကြည့်ပလိုက်မိတယ်။ တချို့ဆိုအဲ့အဘိုးအိုခြေထောက်တွေတောင်တက်နင်းကြတယ်။ဘေးနားကအန်တီကြီးကိုမေးကြည့်တော့ အဲ့တာ သူတောင်းစားကြီးလေ ဘယ်သူကသူ့ကိုခုံပေးမှာလဲရွံဖို့လဲကောင်းတာကိုးတဲ့… ကျွန်မ မစဉ်စားတော့ပဲချက်ခြင်းထပြီး ပါလာတဲ့ပိုက်ဆံ၂ထောင်လုံးပေးပြီး.. “ဘဘ လာ သမီးခုံလာထိုင်ဆိုပြီးတွဲခေါ်ပေးလိုက်တယ်…။ စိတ်ထဲမှာလဲ ငါ့အဖေအမေသာဆိုရင်ဆိုတဲ့အတွေးတွေ နဲ့မျက်ရည်တောင်ဝဲတယ်။ ကားခ၂ဝဝမရှိလို့ပါဆိုပြီးပြော စီးလာတယ်။ကားပေါ်မှာအသိတွေလဲပါကောင်းပါနိုင်တယ်… ဒါမယ့်မရှက်ပါဘူး..အခုစာရေးနေတဲ့အချိန် ကျွန်မဖျားနေတယ်လေ…. အစာလွန်ပြီးဗိုက်တွေအောင့်လို့…ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျေနပ်မိတယ်…။ မူရင်း shinnkhyant မ်က္ရည္ေတြဝဲေနတဲ့ အသက္(၇၀)ေက်ာ္အဖိုးအိုနဲ႔ ဘတ္စ္ကားေပၚက ျဖစ္ရပ္ ဒီေန႔ ဂုဏ္ … Read more
စမူဆာသည်အဘိုးကြီးက ကုမ္ပဏီ မန်နေဂျာကြီးကိုပေးလိုက်တဲ့ စီးပွားရှာနည်းသင်ခန်းစာ စမူဆာသည်အဘိုးကြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ ဒေလီမြို့မှာ နာမည်ကြီး စမူဆာဆိုင် တစ်ဆိုင် ရှိတယ်။ စမူဆာလေးတွေဟာ အရသာ အလွန်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် လူကြိုက်အလွန်များတယ်။ စမူဆာဆိုင်ရဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် လမ်းတစ်ဖက်မှာတော့ ကုမ္ပဏီကြီး တစ်ခုရှိတယ်။ နေ့စဉ်လိုလိုပဲ နေ့လည်စာ စားချိန်ဆိုရင် ကုမ္ပဏီ ဝန်ထမ်းတွေဟာ အဲဒီ ဆိုင်မှာ လာစား လေ့ ရှိကြတယ်။ တစ်ရက် နေ့လည်စာစားချိန်မှာတော့ ကုမ္ပဏီ မန်နေဂျာ ကိုယ်တိုင် နာမည်ကြီး စမူဆာကို လာဆင်းဝယ်တယ်။ အရသာအလွန်ရှိတဲ့ အတွက်ကြောင့် စမူဆာကို ပါဆယ် ထုပ် မသွားတော့ပဲ ဆိုင်မှာ အားပါးတရ ထိုင်စားရင်း ဆိုင်ရှင်နဲ့ စကားစမြည် ပြောကြည့်မိတယ်။ မန်နေဂျာ က ဆိုင်ရှင် အဘိုးကြီး … Read more
ကျမ မသေသေးပါဘူးလို့ ပြောလာတဲ့ သဇင်ဦး
ကျမ မသေသေးပါဘူးလို့ ပြောလာတဲ့ သဇင်ဦး လူမှုကွန်ယက်မှာ ပြန့်နေတဲ့ သတင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောပြလာတဲ့ Presenter သဇင်ဦး ကျမ မသေသေးပါဘူး။ ထမင်းသုပ်တင်မကဘူး အကုန်ရောင်းခဲ့ဖူးပါတယ်။ Video – Thazin Oo (FB Live) #သဇင်ဦး #Thazin Oo #လူမှုကွန်ယက် #Presenter လူမှုကွန်ယက်မှာ ပြန့်နေတဲ့ သတင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောပြလာတဲ့ Presenter သဇင်ဦး ကျမ မသေသေးပါဘူး။ ထမင်းသုပ်တင်မကဘူး အကုန်ရောင်းခဲ့ဖူးပါတယ်။ Video – Thazin Oo (FB Live) #သဇင်ဦး #Thazin Oo #လူမှုကွန်ယက် #Presenter ကျမ မသေသေးပါဘူးလို့ ပြောလာတဲ့ သဇင်ဦး လူမှုကွန်ယက်မှာ ပြန့်နေတဲ့ သတင်းနဲ့ … Read more